Ongororo Mhedzisiro: Vashambadzi Vari Kupindura Sei Kudenda uye Kukiya? | Martech Zone
Sezvo kuvharika kuri kudzikira uye vamwe vashandi vachidzokera kuhofisi, taive nechido chekuongorora matambudziko akasangana nemabhizimusi madiki nekuda kwedenda reCovid-19, zvavave vachiita pamusoro pekukiya kuti vavandudze bhizinesi ravo, chero upskilling wavakaita , tekinoroji yavakashandisa pamusoro penguva ino, uye zvirongwa zvavo nemaonero avo mune ramangwana.
Ithimba iri Tech.co vakaongorora mabhizimusi madiki zana nezve mawaniro avakaita panguva yekukiya.
80% yevaridzi vemabhizinesi madiki vakati Covid-19 anga aine kukanganisa pabhizinesi ravo, asi 55% vari kunzwa vane tariro yeramangwana
100% yevakabvunzwa vanga vachishandisa kukiya kuvaka bhizinesi ravo, vazhinji vachitarisa kushambadzira, kubatana nevatengi, uye kukwidziridzwa.
76% vane kukwidziridzwa panguva yekukiya - neSEO, midhiya yemagariro, kudzidza mutauro mutsva, uye data analytics seunyanzvi hunyowani hutsva kudzidza.
Iwo mabhizinesi akaongororwa aibva mumusanganiswa wemaindasitiri, asi zvikamu zvakajairika zvaive zveB2B services (28%), runako, hutano & hutano (18%), chitoro (18%), software / tech (7%), uye kufamba ( 5%).
Zvinetso zvebhizinesi zvakatarisana nazvo
Zvinetso zvakajairika kumabhizinesi zvaive zvishoma kutengesa (54%), zvichiteverwa nekugadzirisa patsva zvigadzirwa uye zviitiko (54%), vachinetseka kubhadhara vashandi uye bhizinesi mutengo (18%), uye zvichikanganisa mikana yekudyara (18%).
Vese vakapindura vakaongororwa vakati vakashandisa nguva yavo pasi pekuvharirwa zvine mutsindo kusimudzira bhizinesi ravo.
Zvisingashamisi, ruzhinji rwakatanga kutarisa pane zvavanogona kupa online, uye kuvaka kwavo madhijitari ekushambadzira nzira, nekugadzira zvinyorwa zvitsva (88%) uye online zvinowanika (60%), kubata kana kuenda online zviitiko (60%), kubatana ne vatengi (57%), uye kukwidziridzwa (55%) sezvinhu zvakajairika kuita pamusoro pekuvhara.
Vamwe vakati vaimbove nezvimwe zvakanaka mhedzisiro semhedzisiro yeCovid-19, inosanganisira kuwedzera mukutengesa kwepamhepo, kuve nenguva yakawanda yekutarisa kushambadza, kukura mune yavo runyorwa rwekutumira, kudzidza zvinhu zvitsva, zvitsva zvigadzirwa, uye kusvika pakuziva vatengi vavo zvirinani.
Unyanzvi hutsva hunowanikwa nevanhu kuti vakure vaive kudzidza SEO (25%), vezvenhau (13%), kudzidza mutauro mutsva (3.2%), ruzivo rwe data (3.2%), uye PR (3.2%).
Tekinoroji yakaita basa rakakosha mukubudirira kwebhizimusi panguva ino. Zoom, WhatsApp, uye email ndidzo dzaive nzira dzakajairika dzekutaurirana nevashandi, uye kushambadzira midhiya yenhau, kushambadzira email, musangano webhu, uye kuve newebhusaiti yepamhepo kana chitoro ndidzo dzaive nzira dzinonyanya kubatsira tekinoroji. Vazhinji vakashandisa kukiya kumutsiridza webhusaiti yavo, iine 60% vachibvisa saiti yavo yazvino uye 25% vachivaka imwe nyowani.
Zano kumabhizinesi madiki
Kunyangwe paine matambudziko akatarisana nawo, 90% vakapindura vachiti vangave vaine tarisiro yakanaka kana yakajeka kune ramangwana rebhizinesi ravo. Takabvunza vakapindura kuti vape mazano kune mamwe mabhizinesi madiki panguva ino. Izvi ndizvo zvinhu zvakajairika zvakataurwa.
Pivot uye Tungamira
Kuisa pamberi izvo zvaunogona uye kuziva kuti ndeapi mabasa akataurwa nevakawanda vakapindura:
Shandisa nguva ino kurodza zvaunenge watogona.
Joseph Hagen kubva kuRondedzero PR
Tarisa pane zvaunogona, usayedze zvakawandisa. Ita zvimwe zvinokushandira maererano nekutenga kwevatengi uye tarisa pane izvo. Kwatiri, anga ari e-mail kushambadzira uye isu takawedzera zvakapetwa pairi.
Dennis Vu weRingblaze
Tora chiyero pakati pekucheka mutengo nekudyara mune ramangwana. Ona uyu semukana wekuita, kuvaka kuvimba uye kuvimbika.
Sara Mutengo kubva kuCoaching Service Chaizvoizvo
Edza Zvinhu Zvitsva & Iva Agile
Vamwe vakati zvino ndiyo nguva yakanakisa yekukurumidza, uye kukudziridza uye kuyedza zvinhu zvitsva pane vateereri vako, kunyanya panguva yekusagadzikana.
Agility ndiyo yakakosha, zvinhu zviri kufamba nekukurumidza kwazvo nguva dzese zvekuti unoda kuti utarise kune nhau nemaitiro, uye kupindura nekukurumidza.
Lottie Boreham weZVINHU & Co
Tora nhanho kumashure uye kuronga, kushandisa yako nguva zvine hungwaru. Edza izvo zvitsva zvinopihwa pane yako iripo vatengi base, tora iwo, uye wozoita isina kukwana yekutanga kutenderera.
Michaela Thomas kubva kuThe Thomas Connection
Tsvaga mikana yakasarudzika nemamiriro ezvinhu. Tiri kushandisa zvakanakisa zveyakavhara nguva nekupa emahara ekuvaka mazano kubva kune vamwe vekambani.
Kim Allcott weAllcott Associates LLP
Svika Kunze Uye Usvike Kuziva Vako Vatengi
Kukosha kwekuziva uye kunzwisisa vatengi vako uye zvavanoda zvakaburitswa zvakanyanya muzano rakapihwa nemabhizinesi. Mabhizinesi anogona kushandisa kukiya kusimbisa zvakanyanya kuvaka nzira dzekuchengetedza vatengi.
Zvinogona kutaridzika kunge zvisingaite asi zvinyatso kukiya niche yako, tsanangura yako yakakwana mutengi iyo iyo iwe yawakakwanira. Funga nezvavo nedambudziko ravo razvino. Dai iwe uri mune yavo shangu chii chawaizotsvaga izvozvi? Wobva waita chokwadi kuti chigadzirwa chako kana sevhisi inotaura zvakajeka kumhinduro iyoyo. Tinokanganisa kutaura nezvedu panguva yatinofanira kunge tichitaura nezvayo uye kune vatengi vedu. ” akadaro
Kim-Adele Platts e Executive Coaching
Kubva pamaonero eB2B, ndinofunga zvakakosha kuti urambe uchikurukura nevatengi vako uye uite kuti vanzwisise kuti uripo kuvabatsira nekuvatsigira panguva ino yakaoma. Saka kunyangwe zviri kuburitsa zvirimo zvinobatsira kufamba padambudziko, kana kuvimbisa vatengi mabasa varipo kuti vabatsire kutsungirira, zvakakosha kuvhura nhaurirano nekukurumidza uye kuramba uchitaura nemutengi wako.
Jon Davis wekambani yehunyanzvi Medius
Taura uye ita kubatana nevatengi vako. Tsvaga zvavanoda kuti iwe uite kubatsira mamiriro avo. Shandisa nguva ino kugadzira zvemukati izvo zvakanaka izvozvi uye nezveramangwana sezvo iyi nguva yenguva isingazove nekusingaperi.
Calypso Rose wechitoro chepamhepo, Indytute
Tarisa pane Kushambadzira
Munguva dzekuderera kwehupfumi, makambani anowanzo fanika kucheka. Kazhinji, ndeye kushambadzira uye kushambadzira bhajeti iyo yakatemwa. Nekudaro, vazhinji vakapindura vakanongedzera kuiri kuenderera kukosha kwekuita kuti kushambadzira kwako kurunge.
Vanhu vakavhurika kupfuura nakare kose kuti vave nehurukuro dzepamhepo, vanoshandisa yavo yemagariro midhiya, uye vanobatana nevanhu vatsva. Kuvandudza webhusaiti yakanaka uye inoshanda yakakosha kupfuura nakare kose.
Julia Ferrari, Webhu dhizaini
Dzokera kumashure kubva kuyedza kukura izvozvi uye funga 'ndedzipi hurukuro dzandinogona kutanga izvo zvinogona kukura kuva ingangoita mutengi-hurukuro mune 8-10 mwedzi' nguva? '. Lockdown mukana wakakura wekushanda pane ekureba-ekushambadzira mapurojekiti.
Joe Binder weWOAW branding agency
Webhusaiti yakanaka kiyi. Ita kuti ive yako yemhando. Ratidza zvipupuriro kubva kune vatengi kuvaka kuvaka kuvimba uye kukuratidza iwe unoziva zvauri kuita. Shandisa tekinoroji (musangano wevhidhiyo uye skrini-inogoverana) kuyanana uye nekupa kune vatengi. Vatorwa vari kuwedzera kusununguka nekuita bhizinesi pamhepo. Ratidza kumeso kwako uye upe mhinduro kumatambudziko avo. Kana iwe usina hunyanzvi kana uchida rubatsiro mune imwe nharaunda, tsvaga chaicho mubatsiri. Isu tinoshandisa vabatsiri kubatsira nekunyora blog, kugadzira mifananidzo, uye CRM manejimendi.
Chris Abrams weAbrams Inishuwarenzi Solutions
Vatengi Kuchengeta Matanho
Tags: lockdownsMarketingMarketing nzirapandemic
Conor ndiye Munyori Mukuru weTech.co. Kwemakore mana apfuura, akanyorwa nezvese zvinhu kubva kuKickstarter mishandirapamwe uye kutanga kweanotangisa kune tech titans uye hunyanzvi hwehunyanzvi. Nhoroondo yake yakakura mukumira-kumusoro komedi yakamuita iye munhu akakwana kuitisa zviitiko zve tech-centric senge Startup Night paSXSW uye iyo Timmy Mubairo weTech muMotion.